Ncell ले चिनायो सगरमाथा विश्वलाई, नेपाल मा केही न केही #Mount #Everest
Aakar November 01, 2010
गत बिहिबार नेपाली प्राइभेट टेलिकम कम्पनी ‘एनसेल’ ले सगरमाथा मा थ्रिजी सेवा सुरु गर्यो । अब पर्वतारोहीहरु ले सगरमाथा वेसक्याम्प तथा सगरमाथा को सर्वोच्च चुचुरोबाट नै, टेलिफोन गर्न मात्र होइन, भिडियो कल तथा हाइस्पिड इन्टरनेट पनि चलाउन सक्नेछन् ।
Ncell ले सगरमाथा मा थ्रिजी सेवा सुरु गर्यो भन्ने बित्तिकै सारा संसार को ध्यान सगरमाथामा खिचिएको थियो । सोसल मिडिया तथा टेक्नोलोजीका टप साइटहरु मासावेल, इएनग्याजेट, गिजमोडो आदि साइटहरुले ब्रेकिङ न्युज नै दिएका थिए । त्यसबाहेक, बिबिसी टेक, गार्जियन लगायत लगभग सम्पुर्ण मिडियाहरु ले प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका थिए । उनीहरुका लागि, यो अचम्मित तुल्याउने किसिम को समाचार थियो तर हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल मा भने, यी कुरा ले खासै प्रभाव पारेको देखिएन ।
सगरमाथा मा थ्रिजी सेवाले यति धेरै चर्चा पायो कि, माइक्रोब्लगिङ साइट टुविटर मा ‘Trending Topic’ नै Mount Everest बनेको थियो । टुविटर मा विश्वभरि का मान्छेहरु अचम्मित र रोमाञ्चित हुँदै आफ्ना कुरा टुविटर मार्फत विश्वलाई सुनाइरहेका थिए । यो खबर ले उनीहरु निकै उत्साहित बनेका थिए, मलाई लाग्छ यस खबर ले उनीहरुलाई नेपाल जाउँ जाउँ बनाइदिएको छ । आउँदै गरेको पर्यटन वर्ष २०११ लाई पनि यसै खबर का कारण झनै प्रमोशन मिल्ने कुरा मा दुइमत छैन ! सारा संसार यही सगरमाथा को कुरा गरिरहँदा, नेपाल सरकार पोर्न को नाम मा विभिन्न वेवसाइटर र ब्लगहरु ब्लक गर्दै थियो । अनि नेपाली मिडियाहरुले एउटा सानो कुना मा थ्रिजी सेवा सुरु भएको कुरा अटाइदिएका थिए । विदेशी मिडियाले र विदेशीहरुले जति उत्साहपुर्वक हेरेका थिए, तर त्यस तवर ले नेपाली र नेपाल का मिडियाले चासो नलिएको देखियो । तर यही खबर का कारण विश्व ले हामीलाई सकरात्मक रुप मा, सक्षम राष्ट को रुप मा हेरेका थिए । ब्लग को हकमा भने, नेपाल बाट टेकनट तथा आकारटेक ले सगरमाथा मा थ्रिजी सेवा सुरु भएको कुरा लेखेका थिए । ( हेर्नुहोस् 3G Mobile Internet Comes to Mount Everest | Mount Everest is Trending Topic On Twitter – tech.aakarpost | 3G service comes to Mt.Everest with Ncell – Technott)
सगरमाथा मा थ्रिजी सेवा आएपछि त्यसबाट पर्ने सकरात्मक प्रभावहरु को चर्चा प्राय: कुनै पनि मिडियामा नगरिएको देखियो । थ्रिजी सेवा सुरु भएको खबर त पत्रिका मा आएका थिए तर त्यो पर्याप्त थिएन, कारण सगरमाथा हाम्रो गौरव सँग गाँसिएको थियो । यो खबर र यसपछि का कुराहरुलाई नेपाली मिडियाहरु ले प्राथमिकता दिनु जरुरी थियो तर दिइएन । सायद हामीमा केही समस्या छ, अरु ले नदेखाइदिएसम्म नदेख्ने ! नेपाल बाट चलचित्र ओस्कार मा पुग्न ‘इरिक भ्याली’ नै आउनुपर्यो, ‘क्याराभान’ लिएर, अनि सगरमाथालाई अझै धेरै चिनाउन स्विडेन बाट टेलिसोनेरा कम्पनी नै आउनुपर्यो, ‘एनसेल’ को रुपमा ! गौतम बुद्ध र सगरमाथा को टिका टिप्पणी गर्दा ‘सेन्टि’ भएर राष्ट्रवाद छाँट्नेहरुले, यस्ता राम्रा कुरालाई चाँहि बाल नदिँदा, साह्रै नै अचम्म लागेको छ, हामी नेपालीको बुद्धि देखेर !
युरोपियन देशहरु तथा अमेरिकी लगायत विश्व का विभिन्न कुना मा छरिएका मान्छे टुविटर मा भन्दै थिए । ‘सगरमाथा भएका देशका मान्छेहरु विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मा पनि थ्रिजी चलाउँछन् तर आफ्नो यही ट्रेन स्टेशन मा थ्रिजी छैन’ । कोही भन्दैथिए, ‘हाम्रो आइफोन मा त थ्रिजी चलाउन एकदम गाह्रो छ तर नेपाल का मान्छेहरु त सगरमाथा मा पनि अब थ्रिजी चलाउन पाउँछन् ‘ । हाम्रो अवस्था उनीहरुले सोचेजस्तो पक्कै छैन तर पनि उनीहरु को हामी प्रति यति सकरात्मक धारणा हुनु ले, पक्कै हाम्रो बारेमा केही सकरात्मक सन्देश त जान्छ नै ! (हामी त भन्छौँ, “यही मोवाइल चलाउन त टावर चढ्नुपर्छ, झन् थ्रीजी चलाउन त सगरमाथा नै चढ्नुपर्ने रहेछ” ! – यसकुरा ले हाम्रो मोबाइल को गुणस्तर र हाम्रो अवस्थामा बोलिदिएको छ ! ) सगरमाथा चिनिनु भनेको, नेपाल र नेपाली पनि चिनिनु हो । आउँदै गरेको पर्यटन वर्ष २०११ लाई यही थ्रिजी सेवाको सकरात्मक सन्देश ले पनि धेरै टेवा पुर्याउने देखिन्छ ।
टुविटर मा ‘सगरमाथा’ ट्रेन्डिङ टपिक बनेसँगै, आइटि पार्क बाट जितेन्द्र हलकारा ले लेख्नुभएको थियो, “सायद टुविटर मा नेपाल बारेको यही कुरा नै पहिलो पटक ट्रेन्डिङ टपिक बनेको छ” ( “Really glad that Mount Everest is trending. Must be first globally happening thing on twitter from #Nepal”) । वुटवल बाट मोहम्मद तजिम ले “Mount Everest is Trending!” भन्दै खुशी मनाउनुभएको थियो । त्यस्तै केही साथिहरु ले त ‘आफू सगरमाथा को टुप्पो बाट नै टुविट गरिरहेको र फेसबुक का स्टाटस अपडेट गरिरहेको’ भनेर हाँसो ठट्टा पनि गर्दैथिए, टुविटरमा ! केही विदेशीहरु चाँहि भन्दै थिए, “नेपाल को सगरमाथा मा त थ्रिजी सर्भिस छ भने, यहाँ को सरकार ले “फलाना” माउन्टेन मा किन सर्भिस दिइरहेको छैन” । कोही चाँहि आफू पर्वतारोही रहेको र अब को पटक नेपाल जाँदा सगरमाथा चुमेर, त्यहीँबाट भिडियो कल गर्ने आदि कुराहरु सगर्व गरिरहेका थिए । कोही चाँही सगरमाथा मा थ्रिजी भन्ने कुरा पत्याएरहेका थिएनन् त्यैसले तिनीहरु चाँहि लेख्थे, ‘आर यु सिरियस’?
Gizmodo ले लेखेको थियो, Aw Man, Even Mount Everest Has Better 3G Reception Than We Do । त्यस्तै अर्को साइट इएनग्याजेट ले लेखेको थियो Mount Everest now 'wired' for Internet, ready for Starbucks (Why would Ncell want to buildabase station in suchasparsely populated area? Because it is there). अनि मासावेल ले लेखेको थियो 3G Mobile Internet Comes to Mount Everest ।
मलाई लाग्छ, हाम्रो मा नेटवर्क त लाग्दैन, सगरमाथा मा थ्रिजी भएर के भयो र ? भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पनि, सगरमाथा मा थ्रिजी सेवा सुरुहुनुलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
Declaimer : I’m not associated with Ncell.
NCELL ROCKS NTC SUCKS
देशभक्त नेपाली November 2, 2010 at 4:10 PM
एनसेल जती गर्यो त्यती नै तपाइले पनि गर्नु भयो । दिनमा एक पटक ट्विटिनै मन लाग्ने गरि पोस्ट गर्नु भएको छ । धन्यवाद
Nepali Youth November 12, 2010 at 3:58 AM
Abshar Shakya August 1, 2012 at 11:43 AM
IT IS REAL GREAT NEWS FOR ALL PERSONNEL WHO ARE READY TO HEAR OR READY TO GO IN NEPAL FOR VISIT..CONGRATULATION FOR THIS OUTSTANDING JOB PLEASE KEEP IT UP
Prem Rai August 1, 2012 at 11:43 AM
it is great job and congratulation
Abhishak_thapa August 1, 2012 at 11:43 AM